I-Raw Tianeptine Sodium Powder Powder (30123-17-2) Abavelisi-iPhoker
I-Tianeptine ityiwa yetyuwa yomgubo yitriki ye-tricyclic, sisincedisi esikhethiweyo se-5-HT (serotonin; sc-201146) yokuthatha in vitro….
I-Tianeptine ityuwa yesodiyam inesakhono se-nootropic ngokubhekisele kubantu abanokuchaphazeleka okungalunganga okuchaphazeleka kukuphazamiseka kwemood kwaye banako ukuphucula ukugxila kunye nokugxila kubantu abangajonganga kakuhle.
I-Tianeptine ityuwa yesodiyam ine-anti-ixhala kunye noxinzelelo kunye neempawu ze-nootropic.
I-Tianeptine ityiwa yetyuwa yomgubo inxibelelana namalungu amaninzi obuchopho kubandakanya ii-opiod receptors, ezinokuthi zenze umphumo wecala lokuvuya. Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ezihamba rhoqo zibandakanya oku kulandelayo:
Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga zibandakanya izinto ezifana nokuqhinwa, isicaphucaphu, ixhala okanye iTyhefu yetyhefu. Iinkxalabo ezibi kakhulu zibandakanya ukurhoxa emva kokuphathwa gadalala kunye ne-0.1 - 0.3% yabasebenzisi abaya kuba nale ngxaki. Kuze kube nini, njengoko ubona, iziphumo ebezingalindelekanga zetyuwa ye-sodium yeTianeptine ziya kuxhomekeka kubuchwephesha bomntu kunye nobuntu.